सावधान, सेल्फी रिस्ट हुन सक्छ - साइन्स एण्ड टेक्नो - साप्ताहिक
सेल्फी धेरै खिच्नेहरूको हातमा समस्या आएर सेल्फी रिस्ट नामक समस्या सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । हात माथि उठाएर मोबाइल फोनमार्फत सेल्फी खिच्दा यस प्रकारको समस्या देखिने गरेको छ । आइरिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ अक्टोबर देखि २०१७ नोभेम्बरको बीचमा संसारभर २ सय ५० भन्दा बढी मानिसको सेल्फी लिने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी भारत र त्यस पछि रूस र अमेरिकामा मृत्यु भएको थियो । त्यसबाहेक सेल्फी लिने क्रममा हातमा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ । सान फ्रान्सिस्कोस्थित अर्थोपेडिक सर्जन डा. लेबी ह्यारिसनले फोटो एडिटिङ प्रविधि र एप्सको बढ्दो प्रयोगका कारण यस प्रकारको समस्या बढिरहेको बताएका छन् ।
डा. ह्यारिसनका अनुसार धेरै सेल्फी प्रयोग गर्नेहरूमा कुइनाको नसा दाबिने र यसका कारण झन्झनाहट हुने हुन्छ । त्यसपछि दुख्न थाल्छ । यसलाई कार्पल टनल सिन्ड्रोम भनिन्छ । सेल्फी स्टिक प्रयोग गर्दा यस्तो समस्यामा केही कमी आउने समेत डा. ह्यारिसनले बताएका छन् ।